Duqa Muqdisho Oo Amar Culus Kusoo Rogay Ganacsatada Gobolka Banaadir - Wararka Maanta
Home/Wararka Somali/Duqa Muqdisho oo amar culus kusoo rogay ganacsatada Gobolka Banaadir
Duqa Muqdisho oo amar culus kusoo rogay ganacsatada Gobolka Banaadir
Muqdisho (WararkaMaanta) – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa Maanta Shir Gudoomiyey Kulan looga hadlayay Wacyigelinta Xanuunka safmarka ah ee Covid-19 oo ka dhacay degmada Shibis.
kulankan oo ahaa mid xasaasi ah waxaa ka qeyb galay Gudoomiye ku-xigeenada Maamulka Gobolka Banaadir, Xoghayaha Guud, Gudoomiyasha Degmooyinka, Saraakiisha Aminga iyo Agaasimayaal ka tirsan Waaxyaha Dowladda Hoose iyo Gobolka Banaadir.
Muhiimadda kulanka wuxuu ahaa sidii dadka looga wacyi galin lahaa xanuunka Covid19, wuxuuna duqa Muqdisho amar ku bixiyo in qof walba xirto (af-xir) ama Mask, si ay ugu noqoto badbaado ugu yaraan.
War-saxaafadeedka kasoo baxa Duqa Muqdisho waxaa akhriyay agaasimaha Guud ee Warbaahinta Gobolka Banaadir Cabdullaahi Wiish, waxaana la faray Goobaha Ganacsiga, sida Dukaamada, Maqaayadaha, Carwooyinka Bangiyada, xafiisyada bixiya adeegyada in aysan u ogolan qof aan heysan afxirasho in uu ka dukaameysto goobtooda Ganacsi.
Milkiilayaasha Goobaha Ganacsiga ee ku yaalla Caasimadda waxaa la faray inay dhaqan geliyaan amarkaan kasoo baxay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir si looga digtoonaado faafitaanka Cudurka Coronavirus.
amar BANAADIR culus Duqa ganacsatada Gobolka kusoo Muqdisho rogay Somalia
Qaabka loo kala hogaaminayo horyaalka Faransiiska
Madaxweynihii hore ee France oo lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah kadib dambi lagu helay